RarÃ na aho tsy hivavaka!!! | news2dago |
RarÃ Na Aho Tsy Hivavaka!!!
news2dago 21 Febroary, 2010 08:32 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Maromaro ihany ny vaovao tokony ho notanteriko ho anareo tao anatin'izay andro vitsivitsy izay fa saingy nisafidy ny tsy hiteny sy hanoratra mihitsy aho noho ny antony maro sy fahasahiranako manokana. Mety ho gaga izao ianareo @ io lohateny nosafidiko io fa tena io mihitsy ny kasain'ny sasany atao eto @ izao fotoana izao. Manomboka mirotsaka antsehatra @ tolona am-bavaka mantsy ny mpitondra fivavahana @ izao fotoana izao ka manohitohina ny fanjakana izany satria milaza ny marina ry zareo ka maro @ ireo mpitondra no mahatsiaro voatsindrom-paingotra angamba na mahana @ ratsy efa natao sy ny mbola tiana hatao ka hany hery ny ny manakana ankolaka ny olona tsy hiavavaka.
Nisy hetsika tena nafana vay nitranga sy nisoko mangina tsy nampoizina mantsy t@ iny herinandro lasa iny dia ny andro natokana hibebahana sy hifadin-kanina izay notanterahina ny alakamisy 18 febroary lasa teo. Tsy hanavahana finoana moa izany fihetsika izany ary tsy mitaky zavatra be ihany koa fa mba fandavan-tena no takina t@ tsirairay ka mino aho sy araka ny tatitra henoko dia maro ny olona no nanatanteraka izay fifadina izay. Maromaro ny fiangonana nisokatra teto andrenivohitra sy ny manodidina ary niara nivavaka ny mpino sy ireo izay mahatsiaro tena ka te handray ny anjara birikiny @ fanadiovana ny ota vita teto @ty firenena ity.
Ny andron'ny asabotsy 20 febroary kosa no nisy ny fotom-pivavahana lehibe izay nokasaina hatao tetsy @ kianja be ny mahamasina kanefa dia tsy nomena alalàna izany fa nafindra ny fiadidina ny tanana etsy atsonjombe. Na dia niady mafy ny ho eo atsahamanitra aza ireo mpikarakara dia nolavina sy noasarotina ny fakana alalàna tetsy atsahamanitra izay fotodrafitrasa sy fananan'ny FFPM manokana kanefa dia tsy azo nivavahana tao ka voatery nilefitra nakeny atsonjombe ny mpivavaka. Andriamanitra tokoa tsy mifidy toerana hivavahana fa ny fo manantona azy no zava-dehibe. Asakasak'ireo izay manao ajorom-bala izany Andriamanitra izany ihany.
Nahasarika olona ihany izany hetsika izany na dia somary lavitra ary ny toerana fa ny tena nahagaga ahy dia ny nahita ireto miaramila 5 kamio nitomandavana manoloana ny tobin'ny kaominina tetsy analamahitsy fa hatahorana hiaom-pefy ary ve ireto mpiavavaka ireto no dia ambenana mafy toy izao. Nozarain'ny mpiandry baiboly sy programa moa ireto mpitandro ny filaminana ireto ka nahavarina fa tsy nisy sahy nidina ny fiara ry zareo fa nitoby tao anaty ny kamio fotsiny ihany ka hoy ny maro oe mandaitra ny vavaka. Tsaroko etoana ny tenin'ny mpitarika manao oe Andriamanitra no hamaly izay manisy ratsy anareo.
Tsetratsetra tsy aritro Jereo tsara anie fa misy hanodrana indray izao ny mpamela hafatra eto e! lol